Smoothie ho very lanja: ny tombony sy ny fatiantoka | Nutri Diet
Michael Serrano | | Vatsim-pivelomana, Vokatra mampihena lanja
Ny fihoaram-pefy dia afaka manampy anao hahatratra ny tanjon'ny lanjanao. Atolotra amin'ny endrika vonona hisotro na amin'ny vovoka mba afangaro amin'ny rano na ronono, ny olona mila mampihena ny lanjany dia mampiditra ireo vokatra ireo amin'ny sakafony hanakanana kaloria.
Mba hahafahan'izy ireo miasa, ny andraikitr'izy ireo dia tsy maintsy manana endrika mpisolo toerana. Midika izany ilaina ny misotro azy ireo eo amin'ny toerana fisakafoanana lehibe.
2 Miasa ve izy ireo?
3 Azo atoro ve izy ireo?
Ny tombony lehibe indrindra amin'ny fikororohana noho ny sakafo mahazatra dia ny azo entina mora kokoa. Ka ampahany tsara amin'ireo olona mandray azy ireo no manao izany any ivelan'ny trano rehefa kely ny fotoana ananany. Tsy toy ny maro amin'ireo safidy fisakafoanana any ivelany, manome sakafo kaloria ambany kokoa izy ireo, nefa haingana ihany.
Ny fanomanana lovia kely kaloria dia mety mitaky fotoana bebe kokoa amin'ny olona sasany noho ny fahavononany handany ao an-dakozia. Matetika izany dia mitarika azy ireo amin'ny sakafo misy kaloria avo lenta, misy otrikaina ambany. Ny fihovotrovotra dia safidy hafa tokony hodinihina rehefa tsy manam-potoana hahandroana salama ianao.
Tsy tokony hadinontsika koa ireo vokatra ireo dokam-barotra izy ireo ho mpitatitra ny otrikaina rehetra tokony ho azon'ny olona iray amin'ny sakafo feno: proteinina sy fibre, ary koa vitamina sy mineraly ilaina. Rehefa tapaka ny kaloria avy amin'ny sakafo hahazoana fahaverezan'ny lanja dia lasa asa sarotra kokoa ny fanarahana ny filan'ny sakafo isaky ny sakafo. Ka noho izany fomba fijery izany, amin'ny alàlan'ny famoahana ireo otrikaina ilaina rehetra, dia mety hanampy koa ny fikororohana.
Raha fintinina dia tena azo ampiharina ireo horohoron-tany ireo, indrindra rehefa misakafo any ivelany. Inona koa, raha ny sakafo haingana dia mahasalama kokoa noho ny ankamaroan'ny safidy. Ary ireo dia matetika feno siramamy sy sira. Ary satria zara raha manana otrikaina ilaina izy ireo hahavoky ny filana, dia manery ny hihinana mihoatra ny ilaina. Amin'izany fomba izany, tsy toy ny fihovan'ny sakafo, ny sakafo haingana sy ny sakafo voahodina dia afaka mitifitra ny isan'ny kaloria isaky ny sakafo ambonin'izay naroso.
Betsaka ny olona milaza fa niasa ho tetika hampihenana ny lanja. Ny antony anampiany anao hampihena ny lanjany dia satria ambany kaloria izy ireo. Ireo vokatra ireo dia mazàna manome kaloria 200 isaky ny mandeha.
Na izany aza, mety tsy hanompo anao izy ireo. Ahoana no ahalalanao raha izany no izy? Ny matihanina iray dia handinika ny tranga misy anao ary hanampy anao hahafantatra raha mety aminao na tsia ny mandray ny ozatra fanoloana ho fomba fampihenana lanja..
Ary izany dia, toy ny mahazatra rehefa ampidirina amin'ny sakafo ny fanovana lehibe, rehefa manomboka misotro dia mihozongozona ianao mba hahavery lanja dia ilaina ny manao azy eo ambany fanaraha-mason'ny matihanina. Ho fanampin'ny famaritana raha mety aminao izy ireo, dia holazaina aminao hoe firy ny hohozongozo azonao sy ny karazany. Izy ireo koa dia hiandraikitra ny fanarahan-dia.
Ary farany, raha te hahatratra vokatra mahatalanjona, na amin'ny fihoaram-pefy, na amin'ny drafi-pisakafoanana hafa, tokony ho azonao antoka ny mampifangaro azy ireo amin'ny fomba fiaina mahasalama. Midika izany fa mihinana sakafo mahasalama sy miovaova ary manao fanatanjahan-tena tsy tapaka.
Azo atoro ve izy ireo?
Miankina amin'ny firafitra izany, hatramin'ny tsy ny fihovan'ny fihenan-danja rehetra dia mitovy. Amin'io lafiny io dia matetika ny mpividy no mifidy azy ireo mifototra amin'ny fividianana kaloria isaky ny sakafo.
Na dia mifandraika aza ny isan'ireo kaloria, dia mbola zava-dehibe kokoa aza ny manome antoka fa mahasalama tsara ny fihoaram-pefy. Tsy maintsy manome ny sakafo mahavelona mitovy amin'ny sakafo feno izy ireo. Tsara ny mitadidy fa ny fanapahana kaloria rehefa mahazo ny otrikaina rehetra ilain'ny vatana no fomba tokana hampihena ny lanjany amin'ny fomba mahasalama.
fa nomena ny fihovotrovotra sasany dia misy akora namboarina sy siramamy be loatra (izay no antony tokony hamakianao marika foana), manam-pahaizana maro no mampitandrina fa tsy ireo fikororohana ireo no safidy tsara indrindra amin'ny fomba fijery ara-tsakafo. Voatendry ho sakafo voahodina (miaraka amin'ireo fahasahiranana rehetra aterak'izany) amin'ireo mpanohitra azy ireo, dia misafidy ny hanakivy ny haka azy ireo izy ireo. Aza adino fa misy safidy hafa tsy manam-petra hampihena ny lanja. Sakafo izay kely kaloria koa, nefa atao amin'ny sakafo vaovao.
Raha manapa-kevitra ny hiantehitra amin'ny horohoron-tany ianao mba hihena, tokony horaisinao amin'ny fomba voafehy sy arahi-maso izy ireo fa tsy hifantoka amin'ny fotoana maharitra. Ilaina indrindra ireo fitsipika ireo rehefa manolo ny sakafo rehetra amin'ny antoandro amin'ny alàlan'ny fikororohana na soloina hafa ny fomba fanao.
Ny vokatra fanoloana sakafo dia mety ho vahaolana indray mandeha, satria miantoka ny fihinanana kaloria kely sy otrikaina rehefa tsy maintsy misakafo lavitra ny trano na tsy manam-potoana handrahoana sakafo. Na vetivety, mba hahatratrarana tanjona mavesatra. SAINGY ny filamatra dia ny mihinana sakafo ara-dalàna, satria ny shakes dia tsy manome otrikaina betsaka toy ny sakafo mahasalama.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » Vatsim-pivelomana » Malama mba hampihena ny lanja